एसपी-एसएसपी बढुवामा चरम असन्तुष्टि : एसपी उप्रेतीद्वारा राजीनामा, अन्य असन्तुस्ट फेसबुक भित्तामा – JanaSanchar.com
एसपी-एसएसपी बढुवामा चरम असन्तुष्टि : एसपी उप्रेतीद्वारा राजीनामा, अन्य असन्तुस्ट फेसबुक भित्तामा
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७५ माघ २८, सोमबार) ०६:३९
शनिबार बेलुका भएको नेपाल प्रहरीका एसएसपी र एसपी पदमा बढुवा सिफारिसमा नेपाल प्रहरीभित्र चरम असन्तुस्टी देखिएको छ । बढुवामा चरम पक्षपाती भएको भन्दै एक एसपीले राजीनामा दिएका छन् भने नेपाल प्रहरीमा नै कार्यरत केही इमान्दार र बढुवाका लागि योग्य तर बढुवामा नपरेका प्रहरी अधिकारीहरुले आफ्नो फेसबुक भित्तामा उक्त बढुवाप्रति चर्को आलोचना गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक (एसपी) नरेन्द्र उप्रेतीले एसएसपी बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका छन् । उप्रेती पनि एसएसपी बढुवाका लागि प्रबल दाबेदार थिए । तर, उनको नाम परेन । उनले आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका छन् । हाल उनी महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा, टेकुमा कार्यरत् थिए । संगठनले अयोग्य ठानेर बढुवा नदिएपछि राजीनामा दिएको उनले बताए । ‘मेरो करिअर चौपट बनाइदिए,’ उनले भने,‘त्यही कारण अब पदमा बस्नु उचित ठानिन ।’
बढुवामा अन्य प्रहरी अधिकारीले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसपटकको बढुवामा नेताका निकट प्रहरी अधिकारीले छलाङ मारेको आरोप लागेको छ । एसपी बढुवामा नपरेका एक अधिकारीले त त्यस बढुवा सिफारिशप्रति असन्तुष्टि जनाउंदै आइतबार दुई वटा स्टाटस पोस्ट गरेका छन् । उनले आफ्नो स्टाटसमा “थुइक्क ! न्याय हरेको देश, लुट लुट तिमीहरुकै त हो । ” भनेका छन् । उनले आफ्नो अर्को स्टाटसमा “नेपाल प्रहरीभित्र यति धेरै अन्याय हुन्छ भन्नि लागेको थिएन । ईतिहास बोल्छ है ।”
को-को भए बढुवा ?
१४ जना एसपी एसएसपी बढुवाको सिफारिसमा परेका छन् । जसमा सन्दीप भण्डारी पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका छन् । यसअघि उनी तेस्रो नम्बरमा थिए । त्यस्तै टेकप्रसाद राई, दोस्रो, उमेशराज जोशी तेस्रो र श्यालाल ज्ञवाली चौथो नम्बरमा सिफारिसमा परेका छन् । तयस्तै डा. गणेश रेग्मी, रामदत्त जोशी, दीपक थापा, मिरा चौधरी, बुद्धिराज गुरुङ, किरण बज्राचार्य, पोषराज पोखरेल, टेकबहादुर तामाङ, बसन्त कुँवर र भिमप्रसाद ढकालको पनि बढुवा सिफारिस भएको छ ।
त्यस्तै २६ जना डिएसपी एसपी बढुवामा सिफारिस भएका छन् । जसमा रमेश बस्नेत, हिराबहादुर पाण्डे, श्यामकृष्ण अधिकारी, नान्तीराज गुरुङ, रबिन्द्र रेग्मी, गोविन्द अधिकारी, कृष्ण प्रसाई, डा.मेखबहादुर खत्री, बिनोद सिलवाल, भिम दाहाल छन् ।
त्यस्तै रमेश थापा, प्रकाश रानाभाट, बिमल कँडेल, कमल थापा, जनार्दन जिसी, कृष्ण प्रसाद कोइराला, सन्तोष खड्का, दानबहादुर मल्ल, रञ्जु सिग्देल, अनुपम शमशेर जबरा, श्याम महतो, कृष्ण पंगेनी, हेम थापा, अजय केसी, नवराज अधिकारी र वीरबहादुर बुढामगर छन् । विवादका कारण डिआईजीको रिक्त पदमा भने बढुवा सिफारिस रोकिएको छ ।
(२०७५ माघ २८, सोमबार) ०६:३९ मा प्रकाशित